चीनबाट थप ४४ लाख कोरोनाविरुद्धको खोप नेपाल आइपुग्यो Canada Nepal
काठमाडौँ। सरकारले पछिल्लो २४ घण्टामा मुलुकभर थप ३ सय ९१ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ ।
आइतवार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाअनुसार ८ हजार ७७ वटा परीक्षण गर्दा ३ सय ९१ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो । यससँगै कूल संक्रमितको संख्या ८ लाख ५ हजार ३७ (पीसीआर टेस्टबाट) र (एण्टीजेनबाट) ९३ हजार ३ सय ६२ पुगेको छ।
साथै पछिल्लो २४ घण्टामा ६ सय ८० जना कोरोनाभाइरस संक्रमणमुक्त भएसँगै निको हुनेको कूल संख्या ७ लाख ८१ हजार ४ सय ५६ पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यस्तै हालसम्म सक्रिय संक्रमित १२ हजार २ सय ९७ जना रहेका छन् ।
यसैगरी पछिल्लो २४ घण्टामा मृत्यु भएका र त्यसअघि भएका गरी थप ६ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ११ हजार २ सय ८४ जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आश्विन ३१, २०७८ आइतवार १६:५७:०६ बजे : प्रकाशित
नेपालमा एकैदिन ५ सय ९१ जनामा कोरोना संक्रमण हुँदा ९ सय ३७ जना निको भए
काठमाडौँ। सरकारले पछिल्लो २४ घण्टामा मुलुकभर थप ५ सय ९१ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ ।
सोमवार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाअनुसार ९ हजार ६ सय ९७ वटा परीक्षण गर्दा ५ सय ९१ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो । यससँगै कूल संक्रमितको संख्या ८ लाख ५ हजार ५ सय ६० (पीसीआर टेस्टबाट) र (एण्टीजेनबाट) ९३ हजार ४ सय ३० पुगेको छ।
साथै पछिल्लो २४ घण्टामा ९ सय ३७ जना कोरोनाभाइरस संक्रमणमुक्त भएसँगै निको हुनेको कूल संख्या ७ लाख ८२ हजार ३ सय ९३ पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यस्तै हालसम्म सक्रिय संक्रमित ११ हजार ८ सय ७४ जना रहेका छन् ।
यसैगरी पछिल्लो २४ घण्टामा मृत्यु भएका र त्यसअघि भएका गरी थप ९ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ११ हजार २ सय ९३ जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्तिक १, २०७८ सोमवार १८:०३:५६ बजे : प्रकाशित
नेपालमा एकैदिन १ हजार ९६ जनामा कोरोना संक्रमण, सक्रिय संक्रमित कति ?
काठमाडौँ। सरकारले पछिल्लो २४ घण्टामा मुलुकभर थप १ हजार ९६ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ ।
मंगलवार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाअनुसार ९ हजार ९ सय १६ वटा परीक्षण गर्दा १ हजार ९६ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो । यससँगै कूल संक्रमितको संख्या ८ लाख ६ हजार ५ सय १७ (पीसीआर टेस्टबाट) र (एण्टीजेनबाट) ९३ हजार ५ सय ६९ पुगेको छ।
साथै पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार ४ जना कोरोनाभाइरस संक्रमणमुक्त भएसँगै निको हुनेको कूल संख्या ७ लाख ८३ हजार ३ सय ९७ पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यस्तै हालसम्म सक्रिय संक्रमित ११ हजार ८ सय १५ जना रहेका छन् ।
यसैगरी पछिल्लो २४ घण्टामा मृत्यु भएका र त्यसअघि भएका गरी थप १२ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ११ हजार ३ सय ५ जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्तिक २, २०७८ मंगलवार १८:००:१८ बजे : प्रकाशित
नेपालमा एकैदिन ६ सय ६२ जनामा कोरोना संक्रमण, सक्रिय संक्रमित कति ?
क्यानाडा नेपाल क्यानाडा नेपाल
काठमाडौँ। सरकारले पछिल्लो २४ घण्टामा मुलुकभर थप ६ सय ६२ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ ।
बुधवार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाअनुसार ८ हजार ४ सय २६ वटा परीक्षण गर्दा ६ सय ६२ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो । यससँगै कूल संक्रमितको संख्या ८ लाख ७ हजार ५ २ ९पीसीआर टेस्टबाट० र ९एण्टीजेनबाट० ९३ हजार ६ सय ९६ पुगेको छ।
साथै पछिल्लो २४ घण्टामा ७ सय ५८ जना कोरोनाभाइरस संक्रमणमुक्त भएसँगै निको हुनेको कूल संख्या ७ लाख ८४ हजार १ सय ५५ पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यस्तै हालसम्म सक्रिय संक्रमित ११ हजार ५ सय ७९ जना रहेका छन् ।
यसैगरी पछिल्लो २४ घण्टामा मृत्यु भएका र त्यसअघि भएका गरी थप १३ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ११ हजार ३ सय १८ जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्तिक ३, २०७८ बुधवार १७:५१:२६ बजे : प्रकाशित